Kursiga ay ku loolamayaan Caasha Xaaji Cilmi, Abtidoonyare iyo Macalin Mahdi oo ah kan labaad ee ugu adag doorashada Cadaado - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Kursiga ay ku loolamayaan Caasha Xaaji Cilmi, Abtidoonyare iyo Macalin Mahdi oo ah kan labaad ee ugu adag doorashada Cadaado
Kursiga ay ku loolamayaan Caasha Xaaji Cilmi, Abtidoonyare iyo Macalin Mahdi oo ah kan labaad ee ugu adag doorashada Cadaado
November 25, 2016 November 26, 2016 admin5222 Comments on Kursiga ay ku loolamayaan Caasha Xaaji Cilmi, Abtidoonyare iyo Macalin Mahdi oo ah kan labaad ee ugu adag doorashada Cadaado
Kursiga Beesha Gaabane ee reer xaaji Saleeman ku leedahay Baarlamanka aqalka hoose ee Federaalka ayaa ka mid ah kuraasta ugu adag ee taal magaalada Cadaado, iyadoo sababtu tahay danaha tirada badan ee laga leeyahay kursigaas.
Kursigan hadda waxaa u taagan sadex musharax oo kala ah Caasha Xaaji Cilmi, Abtidoon yare iyo Macalin Mahdi. Abtidoon yare oo ay riixayaan madaxtooyada Soomaaliya iyo tan Galmudugba ayaa doonaya in kursigan uu ku soo baxo, balse Ugaaska guud ee Beesha Saleeman ayaa wada tashi ka dib kursigaas u qoondeeyay in gabdho kaliya ay ku tartamaan taas oo raga kursigan doonaya culays ku noqotay.
Gudiga doorashada ee heer dawlad goboleed ee Galmudug ayaa iyaguna diiday go’aanka Ugaaska, iyadoo ay u muuqato inay u garab raaricinayaan musharaxa madaxtooyadu riixayso ee Abtidoon yare.
Dooda ka taagan arrintan ayaa waxaa ka hadashay safaaradda dawlada Maraykanka, taas oo qoraal ay soo saartay 18-dii bishan nuqul ka mid ah madaxwaynaha Galmudug loogu baaqay in la tixgaliyo go’aanka Ugaaska iyo qoondada Haweenka.
Madaxwayne C/kariin ayaa isna jawaab uu safaaradda Maraykanka u qoray ku sheegay in kursigaas Beesha Gaabane ay Xildhibaanad Caasha Xaaji Cilmi ku fadhisay 16-sano, beeshuna aysan hadda isku raacsanayn go’aanka Ugaaska oo cabasho ay ka daba timid. Warkaas oo u muuqdo in Guuleed uu sxbkiis Abtidoon yare u caawinayo.
Dhinaca kale Shir Beesha Gaabane ay Cadaado ku yeesheen ayay ku sheegeen in go’aanka ugaasku yahay mid ay raacsanyihiin. Ugaas Bashiir Ereg oo ka mid ah cuqaasha Beesha Gaabane ayaa sheegay in xilligan yahay waqtiga kaliya ee Caasha Gaabane kursi u soo doonatay ayna siinayaan, maadaama waxqabad ay ku yaqaanaan.
Hadaba su’aasha is wiidiinta mudan ayaa ah Xildhibaanad Caasha ma beeseeda ayaa Xildhibaanad ka dhigtay? Baaritaan kooban oo aan arrintan ku samaynay ayaan ku ogaanay xaqiiqada sadexdii xilli ee ay Xildhibaanad Caasha noqotay Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya.
1- Shirkii Carta Caasha Xaaji waxay ka mid ahayd shir guddoonka, iyadoo u fadhisay beesha lixaad oo ah Haweenka Kursigii Xildhibaanimo ee halkaas ay ka heshayna waxa uu ahaa qoondada Haweenka, ee 25-ta ahayd, xilligaas waxaa Haweenka ka dhex jirtay dood ah inay 4.5 ku qaybsadaan, balse Caasha oo shir gudoon ahayd ayaa tiri” waxaan ka cararayno waa cadaalad darro ee anagu dhexdeeda eex isku samayn mayno”, waxaana qoondadaas loo qaybsaday min 5-xubnood si siman.
Caashana waxay ku fadhisay magaca Gabdhaha Beelwaynta Habargidir, halka kursigii beesha Gaabane uu ku fadhiyay Xildhibaan Cabdi Faarax Jaamac (Cabdi dheere)
2- Shirkii Eldoret /Mpagati Beesha Dashame oo dhan waxa ay heshay hal kursi waxaana qaatay Maxamed Maxamuud Gacmadheere oo Obokor ah. Xilligaas Caasha waxa ay ahayd gudiga hogaaminaya hawlaha shirka (Leaders Committee) waxaana mar labaad mudnaan loo siiyay qoondada kursiga Baarlamanka ee gabdhaha Beesha Habargidir.
3- Sanadkii 2012-dii Beesha reer Xaaji Saleeman waxa ay Baarlamanka ka heshay sadex kursi, mid ka mid ah kuraasta ayaa gabdhaha loo qoondeeyay, labada kalena waxaa beeshu u kala qaadatay Farax iyo Dashame. Xilligaas Caasha gabdhaha afarta jufo ee reer Xaaji ayaa soo doortay si ay Baarlamanka ugu matasho. Hadaba xaqiiqooyinkan ayaa cadaynaya in Caasha waligeed kursi Beesha Gaabane ku fariisan Baarlamanka Soomaaliya.
Arriinta ka dambaysa wararkan soo laalaabtay ayaa ah in dadka qaarkii u isticmaalayaan olole doorasho iyo dano siyaasadeed, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad aan ka waqabin xaqiiqooyinkan. Mar hadii aan ogaanay xaqiiqooyinkaas, jawaabtu waxay tahay in soo noqnoqashada 16-ka sano loo isticmaalayo olole doorasho.
NATO oo Soo Afjartay Howlgalkii Xeebaha Soomaaliya
2 thoughts on “Kursiga ay ku loolamayaan Caasha Xaaji Cilmi, Abtidoonyare iyo Macalin Mahdi oo ah kan labaad ee ugu adag doorashada Cadaado”
Ugasada Galmudug says:
Ugasada Galmudug liked this on Facebook.